Mac iza no tokony hovidiko? Mampitaha an'ireo Mac vaovao. - Hafa
fa maninona no tsy mandeha ny fivarotako fampiharana
block scam dia mety miantso iphone
Azoko atao ve ny manamboatra ny efijery iphone 6-ko
ny Hetsika fahatelo an'ny Apple amin'ny taona 2020 vao vita ny fandefasana azy, ary momba ny Mac io! Apple dia nanambara modely vaovao an'ny solosaina Mac, ary koa ilay voalohany rafitra amin'ny chip (SOC) novokarin'i Apple mivantana. Amin'ireny fivoarana mahaliana rehetra ireny dia mety ho sarotra ny hahafantatra tsara hoe iza no Mac mety aminao. Androany, hanampy anao hamaly ny fanontaniana aho: 'Mac iza no tokony hovidiko?'
M1: Ny hery ao ambadiky ny taranaka vaovao
Mety ny fivoarana lehibe indrindra tafiditra ao amin'ny Macs vaovao tsirairay avy dia ny chip M1, ny chip fikirakirana solosaina voalohany amin'ny tsipika Apple Silicon vaovao. Miaraka amin'ny fahaiza-manao sary SOC haingana indrindra eran'izao tontolo izao, ary koa CPU 8-core, ny chip 5-nanometer M1 dia iray amin'ireo informatika matanjaka indrindra hatrizay.
Apple dia nilaza fa ny M1 dia afaka mihazakazaka amin'ny indroa ny hafainganam-pandehan'ny chip PC ambony indrindra, raha tsy mampiasa afa-tsy ny ampahefatry ny herinaratra ao anatin'ilay fikirakirana. Ity chip ity dia namboarina tsara mba hampitomboana ny fahombiazan'ny MacOS Big Sur, ilay fanavaozana ny lozisialy izay mahatratra ny Mac amin'ny Alakamisy. Raha mampientanentana anao ireo fanavaozana ara-teknolojia rehetra ireo, dia ho faly ianao mahafantatra fa ilay MacBook Air, MacBook Pro ary Mac Mini vaovao dia miaraka amin'ny M1.
tadiavo ny iphone ho an'ny windows
MacBook tsara indrindra sy mora indrindra: MacBook Air
Ny solosaina voalohany nambaran'ny Apple tamin'ny hetsika fandefasana androany dia ilay vaovao MacBook Air . Manomboka amin'ny $ 999, na $ 899 ho an'ny mpianatra, ny 13 ″ MacBook Air dia manasongadina tranga Wedge maivana mitovy amin'ny kinova teo aloha, saingy manome hery bebe kokoa noho ny hatramin'izay.
Ny MacBook Air dia voalaza fa mihazakazaka intelo ny hafainganam-pandehan'ny solosaina finday Windows, ary miaraka amin'ny fanatsarana fitahirizana sy ny fiainana bateria lava kokoa ho an'ny fizahana sy horonan-tsary. Noho ny herin'ny fampisehoana M1 sy ny Retina Wide Colour P3 dia afaka manova sary, horonan-tsary ary sary mihetsika amin'ny hafainganam-pandeha tsy mbola nisy toy izany ny mpampiasa.
Ny iray amin'ireo safidy mahaliana kokoa nataon'i Apple tamin'ny MacBook Air vaovao dia ny fanesorany tanteraka ny mpankafy, miaraka amin'izay koa nampihena ny lanjan'ny solosaina finday ary namela azy hihazakazaka mangina.
Miaraka amin'ny Touch ID sy fakan-tsarimihetsika ISP nohatsaraina, ny MacBook Air dia mety indrindra ho an'ireo mpampiasa tsy miankina na matihanina.
ny fomba fanovana ny emoji an'ny paoma anao
Mac ambony birao tsara indrindra: Mini Mac
Tsy ny MacBooks ihany no vokatra nahaliana ny sasany tamin'ny fandaharana fandefasana hetsika androany. Ny fitaovana vaovao faharoa nasongadin'i Apple androany dia ilay vaovao Mini Mac . Ho an'ireo mpampiasa solosaina amin'ny birao dia tsy te-tsy hahita an'ity ianao!
Ny Mini Mac dia manana chip M1 mitovy amin'ny MacBook Air ary mahazo tombony mitovy amin'ny fanavaozana azy. Ny hafainganam-pandehan'ilay CPU an'ny Mini Mac vaovao dia intelo haingana noho ny maodely teo aloha ary manome sary in-6 ny hafainganam-pandeha. Amin'ny ankapobeny, miasa ny Mini Mac in-dimy haingana kokoa noho ny birao fifaninanana ary mitana ny 10% amin'ny habeny.
ny fomba fanamboarana ny fivarotana fampiharana ao amin'ny iPhone
Raha liana amin'ny fianarana milina ianao, ny motera neural an'ity solosaina ity dia nahita fanatsarana mihombo ihany koa, izay mifameno tsara amin'ireo fitaovana mangatsiaka sy mahomby. Ny vidin'ny Mini Mac dia manomboka amin'ny $ 699.
Mazava ho azy, ny solosaina birao dia tsy dia ampiasain'ny olona antonony raha tsy mahay mifandray amin'ny mpanara-maso ivelany sy ny kojakoja hafa. Soa ihany fa manana Mini input be dia be ny ao ambadiky ny tranga misy azy, ao anatin'izany ny seranan-tsambo USB-C roa izay manohana an'i Thunderbolt sy USB4. Ity endri-javatra ity dia manasa ny fifandraisana amin'ny taonina misy fampisehoana avo lenta, ao anatin'izany ny monitor 6K Pro XDR an'ny Apple.
Mac avo lenta tsara indrindra: 13 ″ MacBook Pro
Nandritra ny taona maro dia nankalaza ny MacBook Pro toy ny solosaina finday azo raisina ao anatin'ny sokajy misy azy. Ho valin'izany, Apple dia naka dingana fanampiny mba hahazoana antoka fa mitazona ny lazany ity solosaina ity ary mijanona eo an-tampon'ny fifaninanana laptop. Ho fanombohana, ny MacBook Pro 2020 13 comes dia miaraka amin'ny M1.
Ny MacBook Pro dia manana CPU 2.8 heny haingana kokoa noho ny teo alohany sy ny motera neural afaka iraika ambin'ny folo ny fahaizany mianatra ny milina. Ity solosaina ity dia afaka milalao horonantsary 8K eo noho eo nefa tsy mametaka endriny ary mihazakazaka avo telo heny ny hafainganan'ny safidy PC mivarotra indrindra.
Lafiny iray miavaka amin'ny MacBook Pro vaovao koa ny fiainana bateria, izay afaka manohana hatramin'ny 17 ora ny fitetezana tsy misy tariby sy ny 20 ora amin'ny filalaovana horonantsary. Mikasika ny fitaovana, ity MacBook pro ity dia manana seranan-tsambo Thunderbolt roa, fakan-tsary ISP misy fifanoherana lalindalina kokoa sy mazava kokoa noho ny teo aloha, ary mikrô izay hijanona ao amin'ny studio fandraisam-peo matihanina.
Manomboka amin'ny $ 1,399, miaraka amin'ny fihenam-bidy $ 200 an'ny mpianatra, ny 13 pounds MacBook Pro dia milanja 3 pounds ary manana rafitra fihenam-bidy mavitrika sy mahomby. Ny tranga misy azy, ary koa ny tranga misy an'ny MacBook Air sy Mac Mini, dia vita amin'ny aliminioma 100% voaverina.
Rahoviana aho no afaka mividy ny Mac Vaovao?
Ho an'izay maniry mafy hametraka ny tànany amin'ny solosainy vaovao dia tsy hiandry ela ianao. Afaka r tahirizo ireo fitaovana telo ireo anio , Ary ho hitan'ny besinimaro amin'ny herinandro ho avy ny tsirairay!
marika batterie mavo amin'ny iphone
Raha te hanandrana ny MacOS Big Sur ianao alohan'ny hampiasana vola amin'ny PC vaovao dia ho hita ny alakamisy 12 novambra io fanavaozana rindrambaiko vaovao io.
Volavola mahazatra, fanavaozana tsy manam-paharoa
Manantena izahay fa ity lahatsoratra ity dia nanampy anao hanapa-kevitra hoe iza no Mac sahaza anao indrindra. Ny tsirairay amin'ireo solosaina ireo dia mampiditra amin'ny vanim-potoana vaovao tanteraka ny vokatra Mac, ary izay azonao tratrarina amin'ireo fitaovana ireo dia miankina aminao tanteraka!
Mac vaovao iza no tena mahaliana anao? Ampahafantaro anay amin'ny hevitra etsy ambany!